သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ The Lady & Future King (သတင်း ဓာတ်ပုံ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
News » သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ The Lady & Future King (သတင်း ဓာတ်ပုံ)	29
သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ The Lady & Future King (သတင်း ဓာတ်ပုံ)
Posted by အရီးခင်လတ် on Jun 21, 2012 in News | 29 comments
အိုင်တီဗီ သတင်း မှ Print Screen လုပ်ပြီး ယူထားပါသည်။
View all posts by အရီးခင်လတ် →	Blog
cum min says: တို့အမေစုလက်တွေ၇ှကုန်မှာဖြင့်……..
မောင်ပေ says: အရီးလတ်ရေ ၊ ဘာအပင်အမျိုးအစား စိုက်တာလဲဗျ…
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2148
Thel Nu Aye says: တတိုင်းမွှေးတဲ့ကိုပေရေ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2603
နိုင်ငံ့အပြင်ထွက်လိုက်မှ ဒေါ်စုကို ချစ်တဲ့ လေးစားတဲ့လူတွေ ဘယ်လောက်များတယ်ဆိုတာ ပိုသိသာလာသလိုပါပဲ။ဒေါ်စုရဲ့ အရည်အချင်းတွေ ပိုပေါ်လွင်လာသလိုခံစားရတယ်။
..ဆိုတော့ စိတ်ထဲမှာ အားနာသလို inferiority ၀င်မိတယ်။
ဒီလို စိတ်ဓာတ် မြင့်မြတ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကဆက်ဆံပုံတွေနဲ့ လားလားမှမဆိုင်ဘူးနော်။
ကြောင်ကြီး says: ပုရ်ှဂလေး အားငယ်နေရင် ဦးကြောင်ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင်လှဲ့… အပြတ်အားပေးမယ် :cool:
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အုကြောင့်
ရဲစည် says: တောက် ကကြောင်ကြီး မူးများနေလားမသိ
မိုးကြိုးတော့ အတုံးလိုက် ပစ်တော့မှာဘဲ …. ဟိုက် သူ့ကွန်းမင့်နား ငါကပ်ရေးတော့ စက်ကွင်းက မလွတ်ပြန်ဘူး မြန်မြန်လစ်မှာ ……ပလစ်ပလစ်
သြော် တဏှာ တဏှာ ဘာမှမမြင်တော့ပါလား….. ဆောရီးပါ အရီးလတ်ရေ
ပို့စ်ဖတ်ပီး အောက်ကကွန်းမင့်ကြည့်ပီး လမ်းကြောင်းနဲနဲလွဲသွားတယ် …. ဒါနဲ့ ဘာပင်စိုက်တာတုန်းဗျ ကျွန်းပင်လား ညောင်ပင်လား ဟိုဂမ္ဘီရအစီအရင်တွေရော ပါသေးလားဗျ…
Was this answer helpful?LikeDislike 1706
မွန်မွန် says: ဟယ်..မှားချက်က ရက်စက်တယ်..ဦးကြောင်ရယ်…
Thel Nu Aye says: Westminster Hall မှာမိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရလောက်အောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုလိုက်ကြွားရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးအရီးရယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးအော်လိုက်ချင်တယ်။ Future King ကတောင် လက်ခံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်က ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ စိုးရိမ်မိတယ် အရီးရယ်။ မနာလိုသူတွေပေါလာမှာကို။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ ဂုဏ်အကြီးကြီးယူပါတယ်။ မြန်မာကွလို့ အကျယ်ကြီးအော်လိုက်ချင်တယ်။ [:-bd]
အရီးကျွန်မကိုယ်စားအဲဒီမှာအော်ပေးပါလား။ [:*] စတာနော်။ ချစ်လို့။ [♥]
htet way says: ၀မ်းသာဂုဏ်ယူ စွာ ကြည့်ရှု့ မှတ်သားလိုက်ပါတယ်။
ငပွကြီး says: မှန်လိုက်လေဗျာ…တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါ…ဒီလို လူမျိုးကျုပ်တို့နှိင်ငံမှာ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာ တော်တော်နဲ့တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်…
ဒါပေမယ့်လေ..ကျုပ်တို့ကသာ ဂုဏ်ယူနေတာ..ဒီလိုပုံစံကို မကြည့်ချင် မကြည့်နှိင်တဲ့သူတွေလဲ ဒီနှိင်ငံမှာအများကြီးရှိနေသေးတယ်ဆိုတာတော့ သေချာတယ်…
ဆူး says: ဘာ အပင် စိုက်တာလဲတော့ မသိဘူး..
ကျွန်း တို့ သစ်မွှေးတို့ လိုမျိုး ကြာလေ တန်လေ အပင်မျိုး စိုက်ရမှာ.. ဟိဟိ..
အသက်လည်း ရှည်တယ်။ မြန်မာမျိုးရင်းတွေက ကမ္ဘာမှာ ထိပ်တန်း စာရင်းဝင်တဲ့အပင်တွေထဲမှာ အဲဒါတွေပါတယ်။
ဒေါ်စုရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံကလေးကို အရမ်း ဂုဏ်ယူမိနေတော့တာပါပဲ။
Wai Aung says: ကြည့်ရသလောက်တော့ သစ်မွှေးမဟုတ်ပါဘူး မဆူးရေ
ဒီနေ့ ကျနော်တို့က စာသင်ပေးတဲ့ British လူမျိုး Mr. Barry က ပြောတယ်။
မနေ့က သူတို့သမိုင်းမှာကမ္ဗည်းတွင်မယ့် ကိစ္စတခုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့ သူ့တသက်မှာ ဒုတိယမြောက် မိန်းမ တစ်ယောက်က British Parliament မှာ မိန့်ခွန်းပြောတာပါပဲ။
သူ တော်တော်တုန်လှုပ်မိပြီး အင်မတန်း ချီးမွမ်းဖို့ကောင်းပါတယ်တဲ့
ကျနော်စာသင်နေရင် ရင်ထဲမှာ မျက်ရည်ကျမိပါတယ်
ပြီးတော့ ကိုယ့်မြန်မာပြည်အတွက် အရမ်းဂုဏ်ယူမိပါတယ်.
ရဲစည် says: လေဒီရှူးခေါ်မလားဘဲ အဲသည်ဒေါက်ဖိနပ်တော့ မကြိုက်ဘူးရယ် ပုံတော်ဖိနပ် မထူမပါးလေးတွေဆို သိပ်လှမှာ ကျုပ်အမြင်ပေါ့…..
kyeemite says: ကျေးဇူးပါကိုခင်လတ်ရေ..အန်တီစုဒီတခါ
PaLote Tote says: အရမ်းကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလိုက်တာ ။
(ဒီလို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းတဲ့သတင်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက မီဒီယာတွေမှ ဖော်ပြပေးပေမယ့် တို့မြန်မာနိုင်ငံက အစိုးရပိုင် မီဒီယာတွေမှာ မဖော်ပြတာ တစ်မျိုးကြီးနော် ။ )
shwe kyi says: ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မှုများစွာနဲ့ ကြည်ကြည်နူးနူးလေးခံစားနေရပါတယ်။
အန်တီစုရယ် လို့ပဲ တိုးတိုးလေးညည်းတွားမိပါတယ်။
Ma Ei says: ဂုဏ်သရေရှိရှိနဲ့
လှပတဲ့ နေတဲ့ စု…
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: အရီးခင်ညား
နောက်လဲ မီကြာမီကြာ တင်ပေးပါဦး.
များတို့ ကွန်နက်ရှင်က သုံးစားလို့ ရဘူးရယ်..
Azzurri says: ဒါပီးရင် ပြင်သစ်သွားမှာတဲ့ ….
နာစရီတို့လူသိုက်ကလည်း တွေ့ချင် ဂါရ၀ပြုချင် ရှာပေတော့မယ်….
Nyein Nyein says: အမေစုက ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ကျက်သရေရှိလိုက်တာနော်…………….. မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးဂုဏ်ယူမိတယ်။ အမေစုကိုကြည့်နေတာ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဝတ်စုံကိုပဲ အမြဲဝတ်တာတွေ့ရတယ်။ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူပါတယ် အမေရယ်။ အခုခေတ် မြန်မာဝတ်စုံကိုတန်ဖိုးမထားသော မိန်းကလေးများ အတုယူသင့်ပေသည်…………….
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ အရီးရေ………….. အရီးတင်ပေးလို့ကြည့်ရတာလေ
သမီး ကြီး says: အရီးရေ..အခုတလော အမေစု သတင်းတွေ..ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်မိရင် ကျွန်တော် တွေးမိတာ တစ်ခုရှိတယ်…အမေစု ရဲ့မြန်မာဝတ်စုံတွေက အရမ်းလှပီးကျက်သရေ ရှိလွန်းလို့ ….အမေစု ရဲ့
designer ဘယ်သူ့များ ဖြစ်မလဲလို့….
ba gyi says: ဒေါ်စု က သည်အပင်ကလေးတင်မက၊တိုင်းပြည်အတွက်အသီးအပွင့်တွေပါမှန်မှန်ကန်ကန်သီးလာနိုင်ဘို့ –
etone says: ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး သံဝေဂရလိုက်တာ ….
သုံးဆယ့် ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်တွေထဲက ကလေးတွေ ဆိုတာလေ … ကိုယ့်ကို နှိမ့်ချအမြဲနေ ဆိုတာလေ … ။ ဒီပုံထဲမှာ ကြည့်ပါဦး … အမေစုသစ်ပင်စိုက်တာ .. ပေါက်တူးကိုလည်း ရွေစက္ကူ ၊ ငွေစက္ကူတွေ ကပ်မထားသလို ၊ ဘေးကနေပေါက်တူးကိုင်ပေးမယ့်လူ ၊ မြေသြစာထုတ်ကိုင် စောင့်မယ်လူ ၊ ရေပုံးကိုင်စောင့်နေမယ့်လူလည်း မရှိဘူး …. ။ ကော်ဇောနီတွေတောင် မြက်ခင်းပေါ်မှာမရှိဘူး ။ နိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရော ကမ္ဘာက အသိမှတ်ပြုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် … ဟိတ်ဟန်မပါတဲ့ သွင်ပြင် ….. ဘယ်လောက် မြင်ရတာကျေနပ်စရာကောင်းသလဲနော် …. ကျေးဇူးပါ အရီးလတ်ရေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 66
စစ်ကဲ says: အဲဒါ ဘယ်နေရာမှာလဲဟင် …..
Nyein Nyein says: Clarence House မှာပါဆိုနေ။ စာလည်းသေချာဖတ်ဘူး။ ဟိဟိ တစ်ဆယ်ယူပြီးလစ်ပြီ။
စောင့် ကြည့်သူ says: တစ်တိုင်းပြည်လုံးမွှေးတော့မဲ့ အတိတ်နိမ်ိတ်များပေလား
Phaung Phaung says: အမေစုအတွက် ဂုဏ်ယူပြီး မြန်မာဟေ့လို့ အခုမှပဲ မျက်နှာပန်းပွင့်လာတော့တယ်။ မြန်မာသတင်းစာမှာ မဖော်ပြတာက “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွားတဲ့ခရီးဖြစ်နေလို့ လွှတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသွားရတဲ့ခရီးမဟုတ်လို့ သတင်းစာမှာဖော်ပြခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့” ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မဖော်ပြချင်တာက မဖော်ပြချင်တာပါပဲ။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုကထောက်ခံလို့ အမေစု ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတာပါလို့ ပြောချင်တဲ့သူတွေ ပါးစပ်ပိတ်သွား တာပေါ့။ နိုင်ငံတစ်ကာမှာ အမေစု ဘယ်လောက်အရည်အချင်းပြည့်ဝပြီး လူရာဝင်သလဲဆိုတာ
အခုတော့ သိသွားကြပြီလား။ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမေစုကို ခြေရာတိုင်းချင်တဲ့သူတွေ နဲနဲတော့ ရှိန်သွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။
သားဦး၊မြေးဦး says: အမှန်ဘဲဗျ လွှတ်တော်လို နေရာမှာ အမေစုလို လူတစ်ယောက်က စစ်သားတွေ၊မျက်ကန်းမျိုးချစ်
အမတ်စုတ်တွေနဲ့ ထိုင်စကားပြောရမှာ မတတ်ဘူးဗျ။